Guddoomiyaha Sanaag oo ka waramay xaaladda Nabad-gelyo iyo nololeed ee gobolka Wednesday 22nd of May 2013 BoggahoreAbout UsMagaalada CerigaboKhayraadka GobolkaArimaha BulshadaTahniyadTacsiMaqaaloGalleryDiinContact Us
Guddoomiyaha Sanaag oo ka waramay xaaladda Nabad-gelyo iyo nololeed ee gobolka Written by admin	Monday, 23 April 2012 13:19	Guddoomiyaha Sanaag oo ka waramay xaaladda Nabad-gelyo iyo nololeed ee gobolka
Gudoomiyaha Gobolka Sanaag Aadan Axmed Diiriye (Geel jire) ayaa faahfaahin ka bixiyay xaalada Guud ee nabadgalyada iyo nolosha ee deegaamada kala duwan ee Gobolkaasi.
Gudoomiyaha Gobolka Sanaag oo u waramayay saxaafadda ayaa sheegay in deegaamo door ah oo ka tirsan Gobolkaasi ay ka da’een raxmaadkii eebe gaar ahaan degsiimooyinka xeebta ka rogan.
Guddoomiyaha mar uu ka hadlayay dhinaca nabad-galyada waxa uu xusay in deegaamada gobolka ay ka sameeyeen gudiyo la shaqeeya Ciidamada Booliska kuwaas oo qayb weyn ka qaatay isku xidhka shacabka iyo Booliska, iyadoo ay wada shaqayn buuxdaa u dhaxayso laamaha dawlada.
Guddoomiyuhu wuxuu intaas ku daray inay mudooyinkii u danbeeyay ay ku hawlanaayeen bixinta Magihii loo kala qaadayay laba beelood oo walaalo ah oo Magaalada Ceerigaabo wada dega isla markaana ay ku rajo weyn yihiin in sida ugu dhakhsaha badan ay ugu soo dhamaato .
Aadan Geel jire waxa uu sheegay oo kale in gobolkaasi ay soo martay abaar xoogan iyadoo Laba Kun Todoba boqol iyo Konton qoys oo soo baro kacay ay ku sugan yihiin Deegaamada Yube iyo Ceerigaabo kuwaas oo u baahan sida uu cadeeyay Gargaar deg deg ah. Waxaanu baaq qaylo dhaan ah u diray Xukuumada Somaliland iyo Hay’adaha Caalamiga ah oo uu ka dalbaday sidii wax loogu qaban lahaa bulshada ku tabaalowday abaaraha soo maray gobolka sanaag.
Gudoomiyaha Gobolka Sanaag waxa uu intaas ku daray in xaalada ugu adag ee Gobolkaas ka taagani ay tahay iyadoo haba yaraatee aan lahayn wax Ceelal ah, waxaanu xusay in meelo kooban oo ceelal leh ay biyahoodii noqdeen kuwo qadhaadh ah oo dadku marka ay cabaan uu ku dhaco shuban maadaama aanay nadiif ahayn.